Service Apt-Ilungile yasekhaya kuShishino kunye nokhenketho - I-Airbnb
Service Apt-Ilungile yasekhaya kuShishino kunye nokhenketho
Igumbi lakho lokulala e indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo sinombuki zindwendwe onguThanh
Ifulethi le studio | isitayile seminimalism | iluncedo kakhulu kwiziko lokuhamba kunye nesikhululo seenqwelomoya
- Isakhiwo sinokupaka simahla, Kwigumbi elinamacala ama-2 okukhanya kwendalo, Isakhiwo sikwindawo ebanzi kunye neemoto ezi-2 ziphepha omnye komnye, abamelwane abalungileyo nabaphucukileyo. Igumbi linekhitshi eligcweleyo, i-minibar, ikhabhathi, kunye nempahla yasekhitshini, isomisi, kwaye xa ufuna nantoni na onokuyicela iLyn House iya kuba ilungele ukuxhasa. Kwakhona loluphi ulwazi oludingayo malunga neVietnam kunye neHà Nộị.
- Isakhiwo sinokupaka simahla, Kwigumbi elinamacala ama-2 okukhanya kwendalo, Isakhiwo sikwindawo ebanzi kunye neemoto ezi-2 ziphepha omnye komnye, abamelwane abalungileyo nabaphucukileyo.
Indlu inemigangatho ye-8, i-1st floor guard kunye ne-lounge ekwabelwana ngayo, imigangatho ye-2, i-3, i-4, i-5 ubukhulu becala ngabakhenkethi bamazwe angaphandle abafunda kwaye basebenza eVietnam ngokuhlala ixesha elide, kuphela kwiNqanaba lesi-6 kunye ne-7th kumgangatho wokuqeshwa kwexesha elifutshane kubakhenkethi.
Igumbi lokuhlambela lomgangatho we-8 kunye nethafa elinemithi kunye nembono yesixeko.
-I-Apartment enenkqubo yokulawula ukufikelela kwiminwe kunye negama lokugqitha, ikhamera yonke ikona kunye nokhuseleko lwe-24/24. Ukhuselekile ngokupheleleyo kwaye ukufikelela smart smart. Umalume ukhuseleko nobubele, friendly. Ndiza kukunceda ngovuyo
- Abasebenzi benkonzo yegumbi bazimisele kakhulu ukukunceda ucoce.
Indawo esembindini yesithili saseHanoi. Isitalato saseHoang Quoc Viet sinayo yonke into oyifunayo ukuze ufumane abantu abasebenzayo, Isitalato saseHieu sigcwele izitya zemveli kunye nezanamhlanje zaseHanoi. Ukutya kwesitrato, unokufumana i-Nghia Tan Market, ejikelezwe yi-Ethnographic Museum, i-Lotte Central (2km), kunye ne-Nhat Tan Bridge (1km) I-20km), umgca othe tye ukuya kumbindi weLake Hoankiem kunye neHanoi Old Quarter (5km)
a sense of comfort, freedom, and the feeling of being anxious to help with everything. You will feel when in my place.
Just call and hotline: + (Phone number hidden by Airbnb)
I have joined every application and are ready to assist you
xa ufuna nantoni na onokuyicela iLyn House iya kuba ikulungele ukuxhasa. Kwakhona loluphi ulwazi oludingayo malunga nesiXeko saseHanoi, siya kuba sikulungele ukukhangela kunye nokubonelela ngolwazi lokukunceda.
Umalume ukhuseleko nobubele, friendly. Ndiza kukunceda ngovuyo
★Ndijonge ukukwamkela ekhaya eLyn !
★Ukuba ufuna nayiphi na inkxaso, ungaqhagamshelana nathi
★Eyona nto ilungileyo
xa ufuna nantoni na onokuyicela iLyn House iya kuba ikulungele ukuxhasa. Kwakhona loluphi ulwazi oludingayo malunga nesiXeko saseHanoi, siya kuba sikulungele ukukhangela kunye noku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cầu Giấy